Museum of Brewery (Pilsen), Pivovarské muzeum - Pilsen
Europe Czech Republic Pilsen
Adresse: 301 14, Veleslavínova 58/6, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, Czech Republic
Telefonhare : +420 377 235 574
Icho hachisi chakavanzika kune ani zvake kuti bheeri yakanakisisa inogadzirwa muCzech Republic . Pano iwe unogona kuwana mamiziyamu akawanda anofadza anopfuura kunze kwekunzwisisa kwechirongwa chakadai: somuenzaniso, Museum of Sanitation kana Museum of Ghosts . Zvisinei, nhamba huru yevanhu vose inounganidza nzvimbo yakakwanisa kutora zvose zvakanakisisa zvezvinhu izvi zviviri zvinofadza. Izvo zveMusimusi weBrewing muPilsen .
Nokuda kwevanodya bheri
Plzen ndiro guta rechina rakakura muCzech Republic, iro rine zvakawanda zvekunakidza mapurani uye zvinyorwa zvenhoroondo. Zvisinei, kune vadzidzisi vemoro, nzvimbo ino inonyanya kuzivikanwa neyakakurumbira "Pilsner". Yaiva muPilsen, kwekutanga kokutanga muna 1842, kuti ndiro yekutanga yezvinwiwa zvinodhaka, Pilsner Urquell, yakabudiswa. Paiva nechiitiko paGuta Brewery, nhasi inozivikanwa se "Pilsen Holidays". Heino Musimusi weBrewing.
Panguva yekushanya iwe unogona kuwana zvinhu zvakawanda zvinonakidza. Vatashanyi vanowanikwa kumativi ose ekubika Pilsner doro. Mukuwedzera, dzimba dzekuratidzira dzicharatidza vashanyi izvo zvinoshandiswa, zvigadzirwa zvekare uye zvemazuva ano uye nzira dzinobatanidza nekugadzirwa kweCzech Czech inonwa. Vatungamiri vanotungamirira vashanyi vemu museum kuburikidza nekubika mapurogiramu, zvishamiso zve cellars uye anozviziva nevanopinda vezana remakore ekumavirira. Kuratidzwa kwemu museum kunosanganisira zvinhu zvekare zveimba zvinoratidza kuti sei uye kubva pane zvakambove iri doro. Rwendo runoguma nechinhu chinonakidza - kunonoka kusvibiswa uye kusagadziriswa doro Pilsner Urquell, ine magirazi akazadzwa kubva muburani.
Kuvigwa kwemu museum kunobhadharwa. Vakuru vachafanirwa kubhadhara $ 4,5 yetikiti, $ 2.5 yevadzidzi nevana vaduku pasi pemakore gumi nemana, vana vaduku pasi pemakore matanhatu vakagamuchira pachena.
Nzira yekuenda sei ku Museum of Brewery muPilsen?
Inowanikwa munzvimbo yepamusoro yePilsen . Kuuya kuno kwakanakisa sechikamu chekufamba kwakarongeka. Mukuwedzera, pedo nechitima bhasi Na Rychtářce, nenzira iyo nzira Nhamba 28 inopfuura. Nzvimbo iri pedyo nechitima cheRipublic square, iyo inotungamira Nhasi 1, 2, 4 kupfuura.
Lace rinopfeka pa prom prom
Nzira yekubika mazai echando?
Zvipo zvinobatsira zveFebruary 23
Couturier Karl Lagerfeld akasimudza chifukidziro chekuvanza mukati mehupenyu hwake hwega
Zvimwe zvinhu zvinotyisa zvikuru zvevana
Physiotherapy ye osteochondrosis
Wakasviba anocheka neeiii neii
Endometrium ndiyo inowanzo
Wen pasi peziso
Jennifer Aniston: mbatya isina kubudirira kana zviratidzo zvepamuviri?
"Chirwere chebhuruu" kana kuti nei vanhu vachiita zviratidzo?
Shati yemapati ane skirt
Nzira yekuve musikana akadzikama sei?
Kuberekwa mushure mekuparara kwepamuviri - nguva uye sei kugadzirisa kubata kwomwana?
Cikisi mukati - wallpaper
Bold uye zvinopesana: Natalie Portman akapa hurukuro kuPorter magazini uye akanyora raporo naAndy Samberg
Kupfekedza kupedzisa kwemafaini